Medical ụlọ ọrụ - Digital Manufacturing Co., Ltd.
SL 3D ngwa nbipute
Usoro SLA Hi
Usoro SLA S
Handheld laser 3D nyocha
Ahaziri ìhè 3D nyocha
3D ebi akwụkwọ ihe
Atọ na-acha ọcha-8006
High ahịhịa resin-9006
Elu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ resin-T1120
Black resin ojii
FDM 3D Mbipụta
FDM 3D Printer DQ usoro
FDM 3D Printer 3DDP Usoro
DATA MGBE Nhazi SOFTWARE
PRINTER LCD / DLP
3D Printing ngwa
Medical ụlọ ọrụ
Ntụpụta elo nlereanya / ngwaahịa
akpụkpọ ụkwụ ụlọ ọrụ
Education na Research
3D ịgụ isiokwu ngwa
Cultural onwunwe digitization
3D ịgụ isiokwu
Reverse imewe / Modelling
Ọrụ Mbipụta 3D
N'ikwu ya n'ozuzu, ọ bụla ndidi bụ a akpan akpan ike ikpe, na ahaziri mmepụta mode nwere ike izute choro ikpe ndị a. Mmepe nke 3D-ebi akwụkwọ technology na-kewapụrụ site ọgwụ ngwa, na ọ na-eweta nnukwu enyemaka reciprocally, ndị a na-agụnye ime ihe AIDS, prosthetics, implants, dentistry, ọgwụ izi ihe, ọgwụ ngwá, na na.
3D-ebi akwụkwọ na-eme ka arụmọrụ mfe, n'ihi na ndị dọkịta na-eme ka a na ime atụmatụ, na ime preview, na-eduzi osisi na-eme ka dọkịta-enwe ndidi na nkwukọrịta.
3D ebi akwụkwọ emeela ka ọtụtụ ọgwụ na ngwá, dị ka prosthetics, orthotics na keakamere ntị, mfe ka na ndị ọzọ ọnụ n'ihi na ọha na eze.
Firstly, CT, MRI na ndị ọzọ na ngwá na-eji ike iṅomi na-anakọta 3D data nke ndị ọrịa. Mgbe ahụ, CT data e reconstructed n'ime 3D data site na kọmputa software (Arigin 3D). N'ikpeazụ, 3D data e mere n'ime siri ike ụdị site 3D na ngwa nbipute. Na anyị nwere ike iji 3d ụdị aka arụmọrụ.
Medical ngwa --- Preoperative nkwurịta okwu
N'ihi na elu-ize ndụ na ike arụmọrụ, preoperative atụmatụ dị ezigbo mkpa. Kemgbe ụwa, ndị ọrịa 'data na e nwetara site Onyonyo ngwaọrụ dị ka CT na MRI, nke na-eje ozi dị ka ihe ndabere maka dọkịta' preoperative atụmatụ. Otú ọ dị, nwetara ọgwụ oyiyi abụọ akụkụ, nke siri ike maka ọrịa ịghọta, karịsịa n'ihi na ụfọdụ mgbagwoju anya ọnya, nke naanị na-agụ site ahụmahụ dọkịta.
The 3D nlereanya nke lesion pụrụ ozugbo e biri ebi site na 3D ebi, nke nwere ike ọ bụghị nanị na-enyere ndị dọkịta ezi ịwa atụmatụ na melite ọma ọnụego nke ịwa ahụ, kamakwa ikwado nkwurịta okwu n'etiti ndị dọkịta na ndị ọrịa na ịwa ahụ plan. Ke adianade do, ọbụna mgbe omume ọdịda, 3D-ebi akwụkwọ nwere ike inye a traceable ndabere maka ma dọkịta na ndị ọrịa
Preoperative nkwurịta okwu
N'ihi mgbagwoju anya arụmọrụ, ndị dọkịta nwere ike kwurịta na ndokwa arụmọrụ dị ka 3d nlereanya inweta ihe kasị mma ime ihe plan.
Ịwa ndu efere
Ịwa ndu osisi bụ inyeaka ịwa ahụ ngwá ọrụ n'ụzọ ziri ezi mejuputa preoperative atụmatụ n'oge ọrụ. Ọ na-e-etinyere na ọtụtụ ndapụta, dị ka: ogbu na nkwonkwo ndu efere, spinal ndu efere, onu ịkụbanye ndu efere, na n'ọnọdu ndu efere nke esịtidem radieshon iyi urughuru nkunye na ngwọta.
The ojiji nke 3D ebi akwụkwọ preoperative imewe nduzi template ma ọ bụ osteotomy template nwere ike ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi chọta lesion ebe, belata iatrogenic mmerụ mere site na njehie, belata ọrụ oge, gbubilata ọgwụgwọ oge nke ọrịa, bụ nke bara oké uru maka ọrịa n'oge na-eme na n'oge mgbake
Ghara ịgbanwe ụlọọgwụ
Prosthetics, ịnụ ihe na ndị ọzọ na-agwọ ngwaọrụ ahụike nwere obere ogbe, ahaziri ina, na ha imewe na-mgbagwoju anya, omenala CNC igwe ngwaọrụ na-ejedebeghị site nhazi akụkụ na ndị ọzọ factors.3D ebi akwụkwọ technology na ọ bụghị nanị ihe owuwu ma na anya, ma nwere atụmatụ nke ngwa ngwa prototyping, nke bụ na ọdabara ka imewe nke ahaziri ngwaahịa. Ya mere, 3D-ebi akwụkwọ technology e ji nwayọọ nwayọọ etinyere ubi nke ghara ịgbanwe ihe. Ke adianade do, ndị na-eri na-amị a otu ahaziri ghara ịgbanwe enyemaka ga-budata belata.
Medical ngwa - orthodontics
Na-adịbeghị anya, software imewe dabeere eze restorations aghọwo-ewu ewu. Ọtụtụ eze clinics, laboratories ma ọ bụ ọkachamara denture emepụta ẹkenam 3D-ebi akwụkwọ technology, nke mere ka oké mgbanwe na eze na ụlọ ọrụ na usoro nke elu kpọmkwem, ala na-eri na elu arụmọrụ. The isi ngwa nke 3D-ebi akwụkwọ technology na eze na ụlọ ọrụ ndị dị ka ndị:
1. Dental Ebu,
Ọtụtụ eze clinics ma ọ bụ laboratories iji 3D na-ebi akwụkwọ na-eme ka ụdị nke ọrịa ezé. Dental Ebu ike ga-eji dị ka Ebu aka na mmepụta nke eze okpueze, wdg, nakwa simulate, atụmatụ na-ekwurịta okwu nke ogwugwo usoro na ọrịa.
2. Dental ịkụbanye,
Ugbu, digital nkunye ọzọ bụ na ihe na-ewu ewu na ahịa. Ihe kpatara ya bụ na nkunye zubere site software bụ ihe ezi, na e mere ịkụbanye ndu efere na ahaziri ịkụbanye ndị ọzọ kwesịrị ekwesị n'ihi na-adakarị were.
Tụnyere na omenala ígwè waya orthodontics, 3D biri ebi anya orthodontics bụghị naanị-adịghị ahụ anya na ndị mara mma, ma na-ọzọ kwesịrị ekwesị n'ihi na onye ọrịa ezé ala na onye ọ bụla na ogbo n'oge orthodontic oge. Ihe bụ ihe ọzọ, 3D biri ebi orthodontics nwere uru n'elu omenala na usoro, nke na-tumadi ịdabere na ahụmahụ nke dọkịta eze.
4. Dental mweghachi. A metal okpueze ofu akwa nwere ike site na 3D-ebi akwụkwọ technology, ma ọ bụ a resin nlereanya nke eze akwa igba site tụfuru-wax usoro, ma ọ bụ ọbụna a kpọmkwem 3D-ebi akwụkwọ nke eze okpueze nwere ike nweta.
na ngwa nbipute na-atụ aro
3DSL-36O Hi (Mee olu 360 * 360 * 300 mm), elu arụmọrụ, elu kpomkwem!
Adress: Mba 8666 Hunan Highway, Shanghai, China.
Ekwentị: +86 (21) 31180558
Okwu ikpe ahụike: Iji 3D Printi ...
Nnukwu ihe ọkpụkpụ 3D obibi akwụkwọ-Venus
3D ebi akwụkwọ kpọmkwem-eji akụkụ
3D ebipụta ngosi nlereanya
3D ebi akwụkwọ ahụ ike nlereanya
Send Email TO US & Nweta price na nkọwa
© nwebisiinka - 2010-2019: Echekwabara ikike niile. Products Guide - Apụta Products - Hot Tags - Sitemap.xml - IGBOB Mobile